အိုးဝေ: မျက်မှန်နှင့် ကျနော်
Posted by ဇနိ at 3:32 PM
khin oo may August 25, 2008 at 5:23 PM
ပိုလိုက်တာ ကို ဇနိရယ်.။မျက်မှန်နဲ.အိပ်တယ်လို. .တို.ကတော.မျက်မှန် ကို ဒုတိယ မျက်စိလို.ခေါ်တယ်။ သူ မပါရင် စာဖတ်လို.မရတော.ဘူ. ageing ပေါ.။
Taungoo August 25, 2008 at 5:26 PM
ကျွန်တော်လည်း မျက်မှန်သမားပဲ။ မျက်မှန်စတပ်ရခင်ကတော့ ပိုပဲခန့်ညားသွားသလို ချောသွားသလိုပဲ။ ခုတော့လည်း မပါရင် မဖြစ်လို့သာ တပ်ရတာ။ တယ်လည်း အလုပ်ရှုပ်သကိုးဗျ။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ကျွန်တော့်ဖေဖေရဲ့ အဖွားဟာ မျက်မှန်လေးနဲ့စာကြည့်စာဖတ် လုပ်ရတာကနေ မျက်မှန်မပါဘဲ စပါးလုံးရွေးနိုင်တဲ့အထိ ပြန်ကြည်သွားဖူးတယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိဘူး။
nu-san August 25, 2008 at 5:51 PM
ကိုဇနိရေ.. အမလည်းမျက်မှန်သမား။ ဒါပေမယ့် မျက်မှန်ကို သတိရမှ တခါလောက် ထုတ်တပ်တော့ အခုဆို မျက်စိက အတော်လေးကို မွဲနေပြီ။ ရထားဘူတာတို့ လမ်းပြမြေပုံစာတို့ဆို ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးရယ်.. မျက်မှန်သွားစမ်းရမယ်လို့ ချိန်နေတာ ၂ လကျော်နေပြီ။ :P
အမမောင်ဝမ်းကွဲလေးဆို ၃ နှစ်သားလောက်ကတည်းက မျက်မှန်တပ်ရတယ်။ အခု ၈ နှစ်။ ကလေးဆိုတော့ ဆော့တာ သူ့အမေက မျက်မှန်ကို ၂ လက် ၃ လက် အပိုဝယ်ထားပေးရတယ်တဲ့။ ဆော့လို့ကျိုးသွားရတာနဲ့။ မှန်ကွဲတာနဲ့။ ကျပျောက်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းက စုံနေတာပဲ။ သူ့အမေက သူ့သားအကြောင်းသိလို့ ပျောက်ပြီဆို အရံသင့်နောက်တလက် ထုတ်တပ်ပေးရတယ်.. ကိုဇနိမျက်မှန်အပိုဆောင်ထားတာဖတ်ရင်း သတိရမိလို့..:) အခုလောက်ဆို အဲဒီကလေးလေး မျက်မှန်ဘယ်နှစ်လက်လောက် စားပြီးနေပြီလဲ မသိဘူးရယ်... :D
မျက်မှန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဝေးမှုန်၊ အနီးမှုန် ပဲ ရှိတာနော.်. အမကြားဖူးတာ တချို့ဆို “အထီးမှုန်”တဲ့.. :D :D ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေဆို မမြင်ဘူးတဲ့ မိန်းကလေးတွေပဲ မြင်လို့တဲ့။ ရုံးက ယောင်္ကျားလေးတွေ မျက်မှန်တပ်တဲ့သူကို အချင်းချင်း နောက်နေတာ ကြားဖူးတာပါ.. :D
ပန်းခရမ်းပြာ August 25, 2008 at 7:01 PM
မျက်မှန်တပ်ဘို့ မလိုရင် အကောင်ဆုံးပေါ့နော်။ ခုတော့ မျက်မှန် မေ့ကျန်ခဲ့ရင် အဝေးကလာတဲ့ ဘတ်စ်ကားနံပါတ်ကိုတောင် မမြင်ရဘူး။
tmn August 25, 2008 at 8:47 PM
ကိုဇနိနဲ့ အဆောင်မှာစတွေ့တော့ မျက်မှန်ကြီးနဲ့... ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ် မျက်မှန်တတ်ရတယ်ဆိုပြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့... ဟော... စုပေါင်းအတန်းလဲတက်ကရော အများကြီးပဗျာ... မျက်မှန်တတ်တက်သူတွေ....
လွင်ပြင် August 25, 2008 at 10:57 PM
ကိုဇနိက မျက်မှန်လေးနဲ့ အရမ်းလိုက်တယ်ဗျ..
မြရွက်ဝေ August 26, 2008 at 6:11 AM
"မဇနိကို မျက်မှန်ငှါးတယ်"!? အဲလိုဆို မဇနိ ကိုယ်နဲ့မကိုက်တဲ့ မျက်မှန်တပ်ရင် ပိုပါဝါတက်သွားမှာပေါ့။
ညီမလဲ မျက်မှန်သမားဘဲ။ မနက်လင်းလာတာနဲ့ မျက်မှန်တပ်ထားရမှ၊ မဟုတ်ရင် မျက်ရိုးတွေကိုက်ရော။ အမြဲတပ်တာ အကျင့်ပါပြီး အနီးကြည့်လဲ တပ်မြဲတပ်ထားတော့ မျက်မှန်ချွတ်ပြီး စာမဖတ်တော့တာ။ မျက်မှန်သမားဒုက္ခက ကိုနိပြောတာတွေအပြင် ကျန်သေးတယ်။ ရေချိုးခန်းထဲ မေ့မေ့လာတာ။ ခုက ကိစ္စမရှိတော့ပေမယ့် အဆောင်မှာတုန်းက တန်းစီရေချိုးတဲ့သူတွေပြီးမှ မျက်မှန်စောင့်ယူရတာ။ ပျောက်ပြီဟေ့ဆို သေချာတယ် ရေချိုးခန်းထဲမှာ ကျန်ခဲ့ပြီဘဲ။ :D
Anonymous August 26, 2008 at 6:30 AM
အစ်ကိုဇနိရေ့ မျက်မှန်သမားမဟုတ်ပေမယ့် မျက်မှန်တပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးနဲ့တွေ့ ခဲ့ဖူးတယ် တစ်မျိုးလေးကြည့်ကောင်းပါတယ်ဗျ ကျနော့် အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်း မျက်မှန်လေးနဲ့နာမည်ပြောင်တောင် ကျနော်ကသူ့ ကိုခေါ်တာမျက်မှန်လို့ဟုတ်မယ် နွေဘက်ကျရင်တော်တော်ဆိုးမယ် သူ့ နာရွက်အပေါ်နားမှာဆို မျက်မှန်ကိုင်းအရာလေးထင်နေတယ် နောက်တော့မိုးတွေရွာတဲ့ အချိန် ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်လည်း ရေစက်တွေစင်ပြီးကောင်းကောင်းမမြင်ရ သိပ်အဆင်မပြေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့သူတွေ သာမန်လူတွေထပ်တော့ လူကြားထဲမှာ ထင်းနေတာပေါ့ မျက်မှန်ကြောင့် :)
တန်ခူး August 26, 2008 at 8:49 AM
ကိုဇနိရေ… ကျွန်မရဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းထဲမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ဆုံးနဲ့အမုန်းဆုံးက မျက်မှန်ပေါ့… ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မျက်မှန်တတ်ရင် အတော်ရုပ်ဆိုးလို့ ပါ… ခုတော့ မျက်ကပ်မှန်ပဲ တပ်တေ့ာတယ်… ဒါပေမယ့် မျက်မှန်ကတော့ လက်လွှတ်လို့ မရဘူးလေ… ကိုဇနိလဲ မျက်ကပ်မှန် စမ်းကြည့်ပါလား…
Republic August 26, 2008 at 11:41 AM
ဟုတ်တယ် ကိုနိ ၊၊ဘ၀မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေ
၀ါးမှုတွေကို လိုအပ်တဲ့အထောက်အပံ့ အရာများနဲ့ကြည်လင် အောင်လုပ်လို့ရပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေ
၀ါးမှုတွေကိုတော့ မိမိရဲ့ ပြုစိတ် လက်ခံစိတ်တွေနဲ့ သာကြည်လင်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ ၊၊ အရာရာကို အကောင်း အဆိုးအမြင်တွေနဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ် ၊၊ဒါပေမယ့် ထွက်လာတဲ့ ပုံရိပ် outcome ကတော့ အနည်းဆုံး Neutral ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် ၊၊
မောင်ဖြူ August 26, 2008 at 12:13 PM
ကိုဇနိကမျက်မှန်တပ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ ကျောင်းကိုပြန်သတိရမိတယ်။ ကျွန်တော်လဲ 4th yr. ရောက်မှ မျက်မှန်စတပ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါလဲ ကိုဇနိက အတင်းတိုက်တွန်းလို့ပါ။ နို့မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်လဲ စမ်းတဝါးဝါးမိုးမှောင်ဖြစ်နေဦးမှာပါ။ ကျွန်တော်သတိရမိတာက ကိုဇနိနဲ့ကျွန်တော် ကင်တင်းထိုင်နေတုန်း ကျွန်တော်တို့အငယ်တန်းကကောင်လေး ကင်တင်းမှာ လက်ဖက်ရည်သောက်နေတာကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး၊ ကျွန်တော့်ကို ဘာထူးခြားလဲလို့မေးတယ်။ အဲဒီကောင်လေးက မျက်မှန်တပ်ထားတာပါ။ သူ့ခမျာ လက်ဖက်ရည်ပူပူကိုသောက်တော့ လက်ဖက်ရည်က ရေငွေ့တွေက သူ့မျက်မှန်ကိုလာကပ်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေတာပါ။ ကျွန်တော်က သတိမထားမိဘူး။ ကိုဇနိပြောမှပဲ သိသွားလိုက်တယ်။ ခုဆို ကျွန်တော်လဲ မျက်မှန်ချွတ်ပြီး လက်ဖက်ရည်သောက်တတ်နေပါပြီ။